UMsunduzi isithako esimqoka ebholeni lakuleli – Msunduzi News
Ngokungangabazisi iNingizimu Afrika yizwe elaziwa kakhulu ngomdlalo kanobhutshuzwayo. Lokhu kufakazelwa yisasasa labalandeli, yingqalasizinda yezinkundla, ubuchule babadlali enkundleni kanye neligi engehamba phambili e-Afrika. Umnikelo woMsunduzi kulokhu mkhulu kakhulu njengoba amadodana aloMasipala eqhubeka nokuba yisithako esimqoka kunobhutshuzwayo wakuleli. Ngaphandle kokukhiqiza izikwibhisi zabadlali namaqembu amathathu adlala kumaligi akuleli okuyiMaritzburg City kanye neJuventus adlala ku-ABC Motsepe. Elilodwa okuyiMaritzburg United lona lidlala ku-Absa Premier League.
Abadlali baseMsunduzi asebezenzele igama kubalwa uSiphesihle “Mbesuma” Ndlovu odlala esiswini kuMaritzburg United nokuthe ngesizini yangowezi-2017/18, waklonyeliswa ngendondo yomdlali omncane owenze kahle.
Ngenxa yekhono lakhe ugcine emenywe kuBafana Bafana ngumqeqeshi uStuart Baxter ukuthi azolihlikihla khona esiswini. Esinye isikwibhisi esivela eMsunduzi nguMabhuti “Bhubesi” Khenyeza ongumgadli.
Lo mgadli usedlale emaqenjini angaphezulu kwamahlanu ku-Absa Premiership lapho okubalwa khona iLamontville Golden Arrows, i-Ajax Cape Town, iKaizer Chiefs, iMamelodi Sundowns, iSupersport United, iMpumalanga Black Aces kanye na-AmaZulu FC nagijima kuwona kule sizini. Abanye abaqhamuka ePietermaritzburg uDumisani Zuma, uWiseman Meyiwa, uPhilani Zulu, uNkosingiphile Ngcobo, uRyan Moon abagijima kuKaizer Chiefs, uSiyanda Zwane we-Arrows, uBandile Shandu weMaritzburg United, uJabulani Ncobeni noSdududzo Dlamini boSuthu, uKhulekani Madondo noXolani Ngcobo beRichards Bay FC egijima kuNFD, noSphelele Mkhulise we Mamelodi Sundowns F.C.
Ithelekile iMsunduzi Cup
Previous post: UMsunduzi: Inhlokodolobha yemicimbi yezemidlalo
Next post: Inqabakutholwa yomsungulibhizinisi waseMsunduzi